Bil Gate oo Yurub ugu baaqaya in ay alaabadda ka xirato qaxootiga Afrikaanka ah | Somaliska
Bil Gate oo Yurub ugu baaqaya in ay alaabadda ka xirato qaxootiga Afrikaanka ah
Ninka lugu magacaabo Bil Gate oo ah ninka abuuray barnaamijyada kombiyuutaradda qaar ku shaqeeyaan ee Windows, ayaa wareysi uu siiyey wargeyska Welt kaga hadlay fikirkiisa la xirriira ajaanibta afrikaanka ah ee ku soo qul qulaya qaaradda Yurub.
“Dhinacna waxaad muujisaan wanaagiina adiinka qaabilay qaxootiga, laakin markasta oo aad qaabishaan waxeey direeysa fariin ah ay dad badani ka soo hayaamaan qaaradda Afrika. Jarmalkuna ma wada qaabili karo dhamaan kuwa doonaya ineey Yurub soo galaan” ayuu yiri Bil Gate oo aad mooda in Jarmalka ka iibinayo afkaartiisa xagjinimadda u muuqata. Wuxuu sidoo kale sheegay in ay haboon tahay in qaxootiga Afrikaanka ah lugu saacido dalalkooda.
“Yurub waa ineey adkeeysa siddii loogu soo talaabi lahaa qaaradeeda gaar ahaan jidka la soo marro” ayuu yiri hadana isagoo marakan u xuub siibtay tallo siin ah sidda irdaha looga xiran lahaa muhaajiriinta afrikaanka ah.
Inta la oga yahay 84 kun ayaa ka soo talaabay qaaradda Afrika kuwaas oo intooda badan soo maray badda u dhaxeeysa Liibiya iyo Talyaaniga. Waana tirro 20% (labaatan boqolkiiba) kor u kacday marka la eeggo sanadkii hore ee 2016-ka. Dalka Ostari ayaa xadka waxaa uu ka xirtay qaxootiga ka soo hayaamay bariga dhaxe islamarkaasina si xun ula dhaqmay qaarkood. Tanina waxaa keentay in badan oo qaxootigaasi ah ay u soo talaabaan dalalka kale ee Yurub. Saas oo ay tahayna waxaa badda u dhaxeeysa Liibiya iyo Talyaaniga ku dhintay dad gaaray 2 kun oo muhaajriin ah oo ay soomaalidu ka mid tahay.